Home News Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed oo Musharixiinta uga digay iney shaki galiyaan...
Wasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed oo Musharixiinta uga digay iney shaki galiyaan amaanka Magaalada Baydhabo
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay Musharaxiinta tiradda badan ee ku sugan degaanada maamulka Koonfur Galbeed in ay ka hortaggaan in falal ka baxsan Ammaanka ay ka dhacaan magaalada Baydhabo.
Wasiirka Amniga Maamulka Koofur Galbeed Xasan Maxamed Xuseen ayaa warbaahinta u sheegay in Ciidanka Booliska ay Adkeeyeen Ammaanka Magaalada Baydhabo, islamarkaana ay diyaar u yihiin ay ka hortaggaan falalka Amniga ka baxsan.
Waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in Musharaxiinta aysan ku xad gudbin hanaanka lagu xaqiijinaayo Ammaanka xilli ay jiraan Musharaxiin hub badan laga galay Magaalada Baydhabo.
Xasan Maxamed Xuseen waxaa uu sheegay in cidkaste oo isku dayda in ay carqaladeyso Ammaanka in tilaabo waafaqsan sharciga laga qaadi doono.
Musharaxiinta ayuu kaga digay in ay sameeyaan falal abuurikara Amni daro, xilli doorashadda Madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ay dhaceyso 5 bisha soo socota.
Previous articleMaareeyaha Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar oo dilay xaaskiisa oo xaamilo aheyd
Next articleNicholas Haysom ”dowladdu waa ay ku fashilantay sugida amaanka”
Khilaafka Maamulka Sare ee Jubaland oo Isku Badalay Caga Jugleyn
Diyaarado Dagaal Oo Duqeyn Xoogan U Geystay Saldhig Maleeshiyada Al-shabaab Ku...